သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု ကျူးလွန်ခံရတဲ့ ရွှေပေါက္ကံက သမီးငယ်လေးအတွက် အစစအရာရာ လိုအပ်သမျှ ထောက်ပံ့ပေးသွားမယ့် လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေ - Zeekwat Hot News
July 13, 20190292
ဇွန်လအတွင်းပိုင်းက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေပေါက္ကံမြို့တွင် အသက် (၁) နှစ်ကျော်လေးသာ ရှိသေးသည့် သမီးငယ်လေးကို လူမဆန်သော လူတစ်ဦးက သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု ကျူးလွန်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သမီးငယ်လေးမှာ ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ဝေဒနာများ ခံစားနေရကာ ဆေးကုသမှုများ ခံယူနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သမီးငယ်လေးအတွက် ပြည်သူများနဲ့ အနုပညာရှင်များက စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ကြပြီး မိဘများအတွက် ကိုယ်ချင်းစာကာ ၀မ်းနည်းဒေါသများ ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ သမီးငယ်လေးအတွက် ပြည်သူများကလည်း အလှူငွေများထည့်ကာ လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။
လင်းလင်းက သီလသမာဓိ ပြည့်စုံတဲ့ ဦးဇင်းတစ်ပါးနဲ့ ညီအကိုလို ချစ်ခင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ကူညီမှုကြောင့် သမီးလေးရဲ့ မိသားစုနဲ့ တွေ့ဆုံဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သမီးလေးအတွက် လက်ဆောင်များနဲ့ သုံးဖို့ အလှူငွေများကိုပါ ပေးလှူခဲ့ပြီး သမီးလေးအတွက် လိုအပ်တာမှန်သမျှများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လင်းလင်းက “သိက္ခာ သမာဓိပြည့်စုံတဲ့ ဦးဇင်းတစ်ပါးနဲ့ ညီအကိုလိုရင်းနှီးချစ်ခင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ကူညီမှုကြောင့် ရွှေပေါက်ကံက ကလေးလေးရဲ့ မိသားစုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပါပြီ။ ကလေးလေးအတွက် လက်ဆောင်တချို့နဲ့ လက်တလောအဆင်ပြေရေး သုံးဖို့အလှူငွေ ကူရင်းနဲ့ပါ။ အဓိက,ကတော့ ကလေးလေးရဲ့ အနာဂတ်အတွက် နေရာထိုင်ခင်း အလုပ်အကိုင် ပတ်ဝန်းကျင်အားလုံး အသစ်ကပြန်စရေးအတွက် ဖခင်မိခင်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မိသားစုမှ လိုအပ်တာများကို ပြင်ဆင်ထောက်ပံ့ဝန်းရံပေးသွားမှာပါ။ လက်ရှိမှာလဲ ပြည်သူများရဲ့ဝန်းရံပံ့ပိုးမှုကြောင့် လက်တလော အဆင်ပြေမှုတွေ တွေ့ရလို့ဝမ်းသာမိပါတယ်။ ပြည်သူ့ခေါင်းဆောင်စစ်စစ် လူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့ အရိပ်အောက်မှာ အားလုံးကျန်းမာကြပါစေ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼” ဆိုပြီး လင်းလင်းက သူ့ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ချစ်သုဝေကလည်း Grace လေးတို့ မိသားစုအတွက် မေတ္တာပို့ကာ ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။
“Graceလေးတို့မိသားစုလေး စိတ်ရောကိုယ်ရော အဆင်ပြေကျန်းမာချမ်းသာပါစေ!!” လို့ သူမရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
Victoria လေးအတွက် အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်နိုင်ရေးကို ကူညီပေးကြသူများထဲမှာ လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေတို့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကလည်း ကိုယ်တိုယ်ကိုယ်ကျ ရေဆုံးမြေဆုံးအထိ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သမီးလေးတွေရဲ့မိဘများဖြစ်တာကြောင့် Victoria လေးအတွက် ကိုယ်ချင်းစာကာ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကူညီပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Source : Htwe Lynn Ko FB
ဇှနျလအတှငျးပိုငျးက ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး ရှပေေါက်ကံမွို့တှငျ အသကျ (၁) နှဈကြျောလေးသာ ရှိသေးသညျ့ သမီးငယျလေးကို လူမဆနျသော လူတဈဦးက သကျငယျမုဒိမျးမှု ကြူးလှနျမှု ဖွဈပှားခဲ့ပွီး သမီးငယျလေးမှာ ကိုယျရော စိတျပါ ဝဒေနာမြား ခံစားနရေကာ ဆေးကုသမှုမြား ခံယူနရေတာ ဖွဈပါတယျ။ သမီးငယျလေးအတှကျ ပွညျသူမြားနဲ့ အနုပညာရှငျမြားက စိတျမကောငျးဖွဈခဲ့ကွပွီး မိဘမြားအတှကျ ကိုယျခငျြးစာကာ ဝမျးနညျးဒေါသမြား ထှကျခဲ့ကွပါတယျ။ သမီးငယျလေးအတှကျ ပွညျသူမြားကလညျး အလှူငှမြေားထညျ့ကာ လှူဒါနျးခဲ့ကွပါတယျ။
လငျးလငျးက သီလသမာဓိ ပွညျ့စုံတဲ့ ဦးဇငျးတဈပါးနဲ့ ညီအကိုလို ခဈြခငျရတဲ့ သူငယျခငျြးတဈယောကျရဲ့ ကူညီမှုကွောငျ့ သမီးလေးရဲ့ မိသားစုနဲ့ တှဆေုံ့ဖွဈခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ သမီးလေးအတှကျ လကျဆောငျမြားနဲ့ သုံးဖို့ အလှူငှမြေားကိုပါ ပေးလှူခဲ့ပွီး သမီးလေးအတှကျ လိုအပျတာမှနျသမြှမြားကို ထောကျပံ့ပေးသှားမယျလို့ ဆိုပါတယျ။
လငျးလငျးက “သိက်ခာ သမာဓိပွညျ့စုံတဲ့ ဦးဇငျးတဈပါးနဲ့ ညီအကိုလိုရငျးနှီးခဈြခငျရတဲ့ သူငယျခငျြးတဈယောကျရဲ့ ကူညီမှုကွောငျ့ ရှပေေါကျကံက ကလေးလေးရဲ့ မိသားစုနဲ့တှဆေုံ့ခဲ့ပွီးပါပွီ။ ကလေးလေးအတှကျ လကျဆောငျတခြို့နဲ့ လကျတလောအဆငျပွရေေး သုံးဖို့အလှူငှေ ကူရငျးနဲ့ပါ။ အဓိက,ကတော့ ကလေးလေးရဲ့ အနာဂတျအတှကျ နရောထိုငျခငျး အလုပျအကိုငျ ပတျဝနျးကငျြအားလုံး အသဈကပွနျစရေးအတှကျ ဖခငျမိခငျနဲ့ ဆှေးနှေးတိုငျပငျပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့မိသားစုမှ လိုအပျတာမြားကို ပွငျဆငျထောကျပံ့ဝနျးရံပေးသှားမှာပါ။ လကျရှိမှာလဲ ပွညျသူမြားရဲ့ဝနျးရံပံ့ပိုးမှုကွောငျ့ လကျတလော အဆငျပွမှေုတှေ တှရေ့လို့ဝမျးသာမိပါတယျ။ ပွညျသူ့ခေါငျးဆောငျစဈစဈ လူထုခေါငျးဆောငျရဲ့ အရိပျအောကျမှာ အားလုံးကနျြးမာကွပါစေ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼” ဆိုပွီး လငျးလငျးက သူ့ရဲ့ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
ခဈြသုဝကေလညျး Grace လေးတို့ မိသားစုအတှကျ မတ်ေတာပို့ကာ ဆုတောငျးပေးခဲ့ပါတယျ။
“Graceလေးတို့မိသားစုလေး စိတျရောကိုယျရော အဆငျပွကေနျြးမာခမျြးသာပါစေ!!” လို့ သူမရဲ့ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာမှာ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
Victoria လေးအတှကျ အမှုမှနျပျေါပေါကျနိုငျရေးကို ကူညီပေးကွသူမြားထဲမှာ လငျးလငျးနဲ့ ခဈြသုဝတေို့ ဇနီးမောငျနှံနှဈဦးကလညျး ကိုယျတိုယျကိုယျကြ ရဆေုံးမွဆေုံးအထိ လိုကျပါဆောငျရှကျပေးနတော ဖွဈပါတယျ။ သမီးလေးတှရေဲ့မိဘမြားဖွဈတာကွောငျ့ Victoria လေးအတှကျ ကိုယျခငျြးစာကာ စိတျရောကိုယျပါ ကူညီပေးနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။
သက်ငယ်မုဒိန်းနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ထိရောက်တဲ့ ပညာပေးကဏ္ဍမှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးသွားမယ့် အေသင်ချိုဆွေ